Airbnb: tanàna amerikana latina 11 tsara indrindra ho an'ireo mpandeha amerikana
Home » Lahatsoratra farany farany » Travel Travel » Airbnb: tanàna amerikana latina 11 tsara indrindra ho an'ireo mpandeha amerikana
Travel Travel • Vaovao Momba ny Aruba • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovao Mafana Kolombia • culinary • Kolontsaina • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana any Mexico • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Airbnb: tanàna amerikana latina 11 tsara indrindra ho an'ireo mpandeha amerikana.
Tsy ny mpitsangatsangana amerikana ihany no mitady toeran-kaleha izay manintona ireo zava-mahaliana ara-kolontsaina sy ny fandosiran'ny morontsiraka tropikaly, fa maro amin'ireo vondrom-piarahamonina Latinx kosa no mitady hifandray amin'ny fotony ary hitsidika ny toerana niavian'izy ireo hahita ny ray aman-dreny, raibe sy renibe ary fianakaviana lehibe.
Amerika Latina dia faritra feno kolontsaina, tantara ary manintona mpizahatany.
Raha ny angom-baovao avy amin'ny Airbnb dia nanjary fironana ho an'ny mpandeha avy any Etazonia ny faritra Amerika Latina.
Amerika Latina dia maneho safidy azo idirana ho an'ireo mpitsidika amerikana avaratra miaraka amin'ny salan'isa vidiny isan'alina latsaky ny $ 150.
Amerika Latina dia faritra feno kolontsaina, tantara ary manintona mpizahatany mahafinaritra izay tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nitombo ny lazan'ny mpizahatany avy any Etazonia.
Ho fanampin'izany, ny fananana vondrom-piarahamonina Latino midadasika, dia nisy hatrany ny fironana amin'ny dia any amin'ny faritra mba hampivelatra sy hihazonana ny fifandraisan'ny mpianakavy izay ilaina ankehitriny mihoatra ny taloha.
Araka ny angon-drakitra avy amin'ny Airbnb, ny firenen'i Amerika Latina dia nanjary fironana ho an'ny mpandeha avy any Etazonia.
Miorina amin'ny isan'ny fikarohana natao teo amin'ny lampihazo, ny tanàna latina 12 malaza indrindra dia:
Raha ny vanin-taona mafana no tanjona dia ny moron-dranomasina, indrindra ny any Mexico izay toerana itodiana any Playa del Carmen sy i Ensenada tamin'ny taona 2021, miakatra toerana 6 raha oharina amin'ny taona 2019, ary koa Tulum, izay nifindra tamin'ny isa 7 ka hatramin'ny isa 3 ao amin'ny lisitra, miorina amin'ny isan'ny karoka.
Ny toeran'ireo tanàna koa dia miavaka amin'ny lisitra, ao anatin'izany Mexico City ary Medellín, samy nekena tamin'ny tolotra kolontsaina avo lenta nananany.
Ny faritra dia maneho safidy azo idirana ho an'ny mpitsidika amerikana avaratra miaraka amin'ny salan'isa vidiny isan'alina latsaky ny $ 150.00.